Ukususela kumaxesha amandulo, oogogo kunye nogogokazi basebenzise ibhiya ukwenzela ukunyanga, ukuze baphucule iinwele zabo. Ubhiya ekhaya sele kusetyenziselwa ukunyamekela iinwele, kwaye njengemaski yokukhula kwabo okungcono. Enyanisweni, iinwele ezithwala ibhiya ziphumelela kakhulu, ukubunjwa kwazo zizodwa kwaye zizityebi kwiivithamini zeqela B: B6, B2, B1; kwaye iqulethe ithusi, i-phosphorus, i-magnesium, isinyithi kunye nezinye izinto ezisebenzayo ezibangela ukuqiniswa nokukhula kwentloko yokuva.
Ngokuqhelekileyo, ubhiya kumanyathelo amaninzi ancediswa ukuba asebenzise njenge-air conditioner, oko kubalulekile ukuba bahlanjulise inwele ehlambulukileyo, ecocekileyo. Udinga ukuthatha isigamu sebheyitha yobhiya obukhanyayo, ukuba unobomi obumnyama - ungasebenzisa ubhiya obumnyama, kuphela i-blonde ayikhuthazwa, kuba inokutshintsha kancane umbala weenwele, ubalale kancane. Ubhiya bufudumale kancane kwisitofu, uze uwahluthe izinwele, emva kwesinye imizuzu elishumi elinesihlanu izinwele zihlambulukileyo ngamanzi afudumele ahlambulukileyo. Musa ukukhathazeka, i-bhiya iphunga ngokukhawuleza, kunye neenwele zakho emva kokusebenzisa ibhiya, kunye nezinto ezingekho ngaphandle, ziba ngokukhawuleza zicacile kwaye zithe tye ngokuthintela.
Iimaski ezinobhiya zingenziwa ngokuhluke ngokupheleleyo, unokongeza ezinye izithako kubhiya, ungasebenzisa ubhiya kwizilwanyana zabantu, kunye nemaski kunye namanye amacandelo, kunye nokwakhiwa kweresiphi nganye yeenwele ezomileyo okanye ezinamafutha kuyahluka.
Ngoko ke, kwingqalelo yakho siza kubonisa iintlobo zokutyelela ezizwe ezikhethiweyo zokwenza iimaski ezisekelwe kubhiya. Ezi zihlamba zeenwele zisetyenziselwa ukubuyisela nokuziqinisa.
I-Recipe 1. I-mask yamadoda ukuqinisa ukubuyiswa kweenwele ezinobunzima nezomileyo.
Thatha ihafu yesende ye yogurt okanye i-yogurt uze udibanise nehafu enye yeglasi yebhiya. Sifaka le maski kwibhere kwizinwele, ngexesha elifutshane, imizuzu engamashumi amabini, sihamba kunye ne-polyethylene, kwaye phezulu ngentonga ye-terry. Emva kwemizuzu echaziweyo, susela ngamanzi afudumele.
I-Recipe 2. I-mask mask yoxinano, amandla kunye nokukhula kweenwele ezintle.
Sithatha ama-gramu amabini eesonka, isoloko isonka. Gcwalisa isonka ngehafu yesitha yobhiya, ushiye iiyure ezimbini. Emva koko, umxube utyatywe kakuhle, unokuxuba umxube okanye kwi-blender kwaye ufake isicelo sokucocekisa iinwele, ngelixa ubeka intloko ngefilimu ye-polyethylene kunye nelinen elifudumeleyo. Emva koko, emva kwemizuzu engamashumi amathathu, uhlambe ngamanzi, uhlambulule ngeviniga ye-apple cider, isisombululo sayo sokukhanya.
I-Recipe 3. Ukubuyisela imaski kunye nobhiya kwizinwele ezinomileyo.
Ukwenza imaski, xubana isigamu seglasi yebhiya kunye neoli yeoli, ipofile. Siza kufaka umxube kwizinwele, simise iminyaka elishumi elinesihlanu ukuya kumashumi mabini anesihlanu imizuzu. Le recipe yendoda ibuyisela ngokugqithiseleyo iinwele ezonakaliswe ngaphambili kwaye ziphilise iziphelo ezivakatyeweyo.
I-Recipe 4. I-mask esekelwe kwibhiya ekhuthaza ukukhula kweenwele, kwaye isetyenziselwa ukuphatha iinwele kwi-fat content content.
Le mask yasekhaya izakusindisa ngokumangalisayo kwiinwele ezinamafutha, kwaye unika neenwele zakho ubuninzi obongezelelweyo kunye nomlinganiselo obonakalayo. Thatha iqanki elinye leqanda, isiqingatha seglasi yebhiya kunye ne-teaspoon yobusi. Hlaziya zonke izithako uze usebenzise ubunzima kwiinwele, zakuhlamba ngaphambili. Emva koko gubungela intloko yakho ngento efudumele kwaye, emva kokuma emizuzu engamashumi amabini, sukuma isisk kunye namanzi.
I-Recipe 5. Imaski enceda nge-alopecia kunye nokulahleka kweenwele.
Kubalulekile ukuthatha isipuni sesithintelo se-burdock, iisoni ze-hops kunye ne-ayr. Emva koko udinga utshani ukuthulula iglasi yebhiya eshushu, kunye ne-bay, ukunyanzelisa iyure. Emva kokunciphisa ukunyakanyiswa kwaye uphendule ngokucophelela iminwe yakho kwisikratshi. Ukuba ungakhathazeki ngephunga lebhiya, awukwazi ukuhlamba i-mask nonke uphinde uphinde ulandele le nkqubo yonke malunga neenyanga ezimbini ukuya kweyesithathu, malunga neyesibini okanye ezintathu, njengoko kulungele kuwe, kanye ngeveki.
I-Recipe 6. Ukuhlambulula i-bhiya, ukusindisa kwizinwele ezithandayo kunye ne-dandruff.
Ufuna ezimbini iipunipoyi ze-sage kunye nettle kunye neiglasi ezimbini zobhiya obushushu. I-Grasses ithululela ubhiya, igxininise malunga neyure. Emva koko, gxuma uze uhlabe entloko, kwesikhumba. Ukugxininisa iyure ngexesha, kwaye ke uyenze ngokufanelekileyo kwaye ukukhushulwa kwebhiya ukugubungele kwi-scalp. Kuhle ukuba wenza imaski kusihlwa, kwaye kusasa nje uhlambe. Kwiinyanga ezimbalwa, yenza le maski ubuncinane kabini ngeveki.
I-Recipe 7. I-Mask yokunyusa iinwele.
Yongeza i-yogurt okanye i-kefir ebhiya, thabatha yonke into ngohlobo olufanayo, xubana kakuhle. Zibeke zonke kwiinwele zakho uze ubeke ingxowa. Emva kwemizuzu engama-30, susela ngamanzi afudumele.
I-Recipe 8. Imaski yeenwele kunye nebhiya kunye namakhambi.
Lungiselela amaqabunga e-birch, i-hop cones, i-marigold. Gweba kakuhle kwaye udibanise kwiindawo ezilinganayo. Emva koko, uthele i-powder elungiselelwe yamacube ngebheriya elula kwaye uyifihle iiyure ezingama-2 kwindawo efudumeleyo. Emva koko, hlalutya ukumnika kunye nokuyihlambela kwisikratshi ngokunyakaza, ukuphinda oku malunga nama-2 ngeveki enye.
Iimpawu zoboya bentloko
Izinwele ezimfutshane ezifashiniweyo zentambo, Ubusika 2016: iifoto zeenwele ezinqabileyo kakhulu zentloko ezimfutshane zonyaka we-Autumn-Winter, 2015-2016
Ukutya okunempilo kunye nendlela yokulahleka kwesisindo
Umntwana omncinci kunye noqhagamshelwano lwamalensi
Abafazi abatyebileyo ziintombi zabantu abadumileyo baseRashiya
Unokunyamekela njani izipikili zakho?
Serotonin kwimpilo yethu
Ukwenza imidlalo ekhaya
Apho ukuthenga iingubo ezintle-2017: I-TOP-6 iimveliso zangaphandle kunye nezasekhaya
Ziziphi iintlobo zabasetyhini abazenzayo?
Iipropati ezisebenzayo ze-Licorice kunye ne-Eleutherococcus herbs